Ny samonin’ny bilaogy Bangladeshita (oktobra 2006) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2018 16:18 GMT
(Marihina fa tamin'ny 9 Oktobra 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ny zava-nitranga tamin'ny bilaogy Bangladeshita manerana izao tontolo izao:
* Politika: Nampiseho ny fanadihadiana nivoaka tao amin'ny Daily Star dia fa misalasala ny 53%-n'ny mpifidy ka nahatonga ny fiheverana ny fifidianan'ny taona 2007 ho tena mampisalasala. Nilaza i Nazim Farhan Chowdhury avy ao amin'ny Conversations with an Optimist fa izany no nitranga satria tsy matoky intsony ireo politisiana ny mpifidy. Manana fandalinana mahaliana momba ny herijikan'ny antoko lehibe izy.
* Fiainana: Share the Magic ao amin'ny lohahevitra mamaivay hevitra ao Bangladesh .
* Zon'Olombelona: Zubair ao amin'ny vondrona bilaogy Unheard Voices – Drishtipat nitaraina noho ny haratsian'ny fanararaotana ny mpanampy an-trano ary nitady fomba hanampiana azy ireo sy nanomboka hetsika fanentanana.
Niteraka adihevitra be ny fitsarana tsy rariny an'i Salah Uddin Shoaib Choudhury tao Bangladesh. Manana famintinana momba ireo fanehoan-kevitra avy amin'izao tontolo izao i Sepia Mutiny. Na dia izany aza dia mbola olona afaka i Mr. Chowdhury ary mahagaga fa mangina manoloana ny olana ny gazety ao an-toerana.
* Herisetra: Nitsikera endrika feno herisetra tamin'ny hetsi-panoherana sy ny herisetra nataon'ny polisy tao Bangladesh i Nazim Farhan Chowdhury avy ao amin'ny Conversations with an Optimist. Niampanga ny fomba fitantanana ity toe-draharaha ity izy ary nanontany raha mbola hampiasa ny fahendren'i Gandhi sy ny Islamo ny Bangladeshita mba hametrahana ny famahana olana am-pilaminana.
* Kolikoly: Niady saina i Mohammad Farhan Husain ao amin'ny Had I been in Voyager 1!!! tamin'ny lahatsoratra iray momba ny kolikoly ao Biman, mpandraharahan'ny fitaterana izay tsara laza ao Bangladesh .
* Sakafo: ” Ranna Khadyo Pushti ” nosoratan'i Siddiqua Kabir no bokin'ny fahandroan-tsakafo malaza indrindra ao Bangladesh. Manana dika mitovy amin'ity boky ity ao amin'ny arimoarany ireo Bangladeshita mpila ravinahitra maro. Nidera ity boky ity i Ihtisham Kabir avy ao amin'ny blaogy Back to Bangladesh ary nilaza fa sady manampy any an-tanindrazana sy any ivelany izany.
Namoaka sary sasantsasany ihany koa izy mampiseho ny sakafo matsiron'ny Iftar, izay amidy mandritra ny fotoan'ny Ramadany eny an-dalamben'i Dhaka.
* Fitsidihana: Manana sary mahafinaritra avy amin'ny fitsidihany tany Rangamati sy Bandarban i Sanjoy Kumar , toerana mahafinaritra ho an'ny mpizaha tany any Bangladesh ireo toerana ireo.
* Lamaody: Misy fomba fitenenana hoe ‘ny akanjo no maharangahy’. Namakafaka ireo lehilahy Bangladeshita amin'ny lamaodiny i Andrew Morris avy ao amin'ny Morris the Pen.
* Teknolojia: Nampahafantatra i Asif ao amin'ny vondrona bilaogy Unheard Voices – Drishtipat fa nahavitra fampidirana lahatsoratra miisa 10.000 ny Wikipedia Bengali ary lasa fiteny faharoa any Azia Atsimo ny Bangla tamin'ny fanatanterahana izany.